कुन नेताले कहाँबाट गरे मतदान ? देखिए यस्ता परिदृष्य (हेरौं फोटोफिचर) | suryakhabar.com
Home तस्विरहरु कुन नेताले कहाँबाट गरे मतदान ? देखिए यस्ता परिदृष्य (हेरौं फोटोफिचर)
कुन नेताले कहाँबाट गरे मतदान ? देखिए यस्ता परिदृष्य (हेरौं फोटोफिचर)
on: २१ मंसिर २०७४, बिहीबार ०९:२८ In: तस्विरहरुTags: कुन नेताले कहाँबाट गरे मतदान ? देखिए यस्ता परिदृष्य (हेरौं फोटोफिचर)No Comments
काठमाण्डौ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दोश्रो चरणमा हुने ४५ जिल्लामा मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ । बिहान सातबजेदेखि सुरु भएको मतदान प्रक्रियामा मतदान हुने प्रक्रिया जारी रहेको छ । बिहान ठुला दलका शीर्ष नेताहरुले समेत मतदान गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समेत मतदान गरिसकेका छन् ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि एमाले नेता शंकर पोख्रेल र माओवादी केन्द्रकी प्रवक्त पम्फा भुसालले पनि मतदान गरिसकेकी छन् । अध्यक्ष दाहालले चितवनबाट मतदान गरेका छन् भने कांग्रेस नेता पौडेल र कोइराला क्रमस तनहुँ र मोरङबाट मतदान गरेका छन् ।
त्यस्तै एमाले नेता पोख्रेलले दाङबाट मतदान गरेका छन् भने भुसालले ललितपुरबाट मतदान गरेकी छन् । त्यस्तै दलका अन्य नेताहरु पनि मतदान प्रक्रियामा भाग लिने क्रम जारी रहेको छ । एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता सुवास नेम्वाङले इलामबाट मतदान गरेका छन् । हेरौं शीर्ष नेताहरुले मतदान गर्दा देखिएका दृष्यहरु । फोटोफिचर ।
Tags: कुन नेताले कहाँबाट गरे मतदान ? देखिए यस्ता परिदृष्य (हेरौं फोटोफिचर)
रविन्द्र मिश्रले पनि गरे मतदान
मतदान गरेलगत्तै अधिकांश नेताहरुले दिए यस्ता प्रतिक्रिया, देखियो शुभ संकेत !
नेविसंघले ७७ वटै जिल्लामा बुझायो भारतको बिरोधमा ज्ञापनपत्र (तस्विरहरु)
३० बैशाख २०७७, मंगलवार २०:५५
बजेट अधिवेशनको पुर्ब सन्ध्यामा साँसदहरुको स्वाव संकलन (तस्विरहरु)
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार १४:५७
नेविसंघले गर्यो सामाजिक दूरी कायम गर्दै देशभर आन्दोलन
१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार १०:५२
२१ मंसिर २०७४, बिहीबार ०९:२८